BEESHA ARAB OO KU GACAN SAYDHAY HABKA SAAMI QAYBSIGA XISBIGA WADANI - www.dhanbaalnews.com
BEESHA ARAB OO KU GACAN SAYDHAY HABKA SAAMI QAYBSIGA XISBIGA WADANI
Saami qaybsiga hawl wadeenada xisbiga wadani .
Waxaa ka muuqata cadaalad daro wayn
121 kaa xubnood ee gudiyada ah . Waxaa beesha koonfurta haragaysa iyo gobolka hawd iyo waqooyiga burco . Lagaga daray 8 xubnood . Halka beelaa qaar 45 yihiin qaarna 37 yihiin qaarana 31 yihiin .
Waxaan xaq u leeyey wixii beelaa kale lagaga daray .
Waxaan arkayaa sidaa hoos beesha arab loogu dhigay in xukumada wadanina sidaas ay kasii hoosayn doonto .
Waayo maanta ninka isagoo cod naga raba sidaa noo qiimo dareeyey .haduu ku guulaysto may qiimaynayaa waa maya .
Waxaan leeyey hadii beeshani kula fududaatay way kula cuslaan .raacdadooduna way adkaan .
Wixii xaq aanu u leenay kama habranayno waanu ka hadlaynaa . Hadii loo haysto inaanu jeebka ku jirno kuma jirno c/raxmaanow . Waxaad beeshaada siisay ma waxaad garan wayday beelaa kuu codaynaya sii .
Maad garan waayine waa badheedh iyo halkaad ka taagantay beesha arab .
Qiimo uma haysid waanay muuqataa .
Ilaa xilal ayaanad ka siin saamigii fulinta oo lagaa xishooday . Maanta se mataalo in lagaa xishoodo .
Waana laysku cadaysan doonaa . Badaana wax walba lasoo dhigi .
Hadhaw ayaa la yidhaa reer hebel namay wanaajin iyo jilibkaasi way na xumeeyeen .
Maanta dadku waa qoysas . Waxaa iman doonta in jilibo dhami kalsoonidii dib ula laabtaan . Cidii wax ka qabanaysa arintaa waa cid u damqanaysa wadani waxaanse hubaa inay lasoo safan doonaan kuwii ay waajibka ku ahayd inay qabtaan qaladka .
Waliba aniga isoo weerari donaan oo aflagaado ay lasoo joogsan taasna waxay sii cadayn doontaa qiimo darada beeshan loo hayo . Xaqa waa loo hiiliyaa wixii xaqdaro ahna layskuma taageero hadaanu xaq daro ka hadlayno si fiican in nalooo qabtaa waa waajib hadii aanu cadaalad daro muuqato ka hadlaynana hanalaga daayo oo ha lays qabto .
Kulmiyaan guulwadayn ku diiday wadanina miyaan guul wadeeya oon qalad iyo cadalad daraba ma waa saxbaan idhaa waa maya taasi waa taynu rabno inaynu dalka ka badalno . Hadaba arintaas way taagantay waxayna keeni doontaa foolxumo somaliland shacbigeeda wada gaadha .
. .Cabdi Xakiin Gaaxnuug
Shir lagu gorfaynaayay xoojinta nabad gelyada oo ka dhacay xarunta degmada macalin haaruun
Degdeg Wershad dharka soo saarta oo laga furay dalka Ethiopia sidoo kale waxa laga furay dalka Ethiopia Cisbitaal noociisu ku cusubyahay geeska
GUDOOMIYAHA DEGMADA AHMED M.HAARUUN OO MAANTA WADDOYIN KA BANEEYAY DEGMADA MACALIN HAARUUN
Baaq Nabadeed uu soo saaray Ururka Midnimada Direed (UMD) shaqaaqada Beelaha walaalaha ah ee Jaarso iyo Geri
DUQA CAASIMADA HARGEISA IYO KU XIGEENKISA XOGHAYAHA FULINTA D.HOOSE OO HORMOOD U AHAA SO DHAWAYNTA MADAXWEYNAHA EE MAANTA